ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က “နီပေါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ၂၀၁၉” သို့ တက်ရောက် – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က “နီပေါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ၂၀၁၉” သို့ တက်ရောက်
(၃၀-၃-၂၀၁၉ ရက်၊ ကတ္တမန္ဒူးမြို့)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းထွန်း ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် နီပေါနိုင်ငံ၊ ကတ္တမန္ဒူးမြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ ကျင်းပသည့် “နီပေါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ၂၀၁၉” သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို နီပေါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘုတ်အဖွဲ့၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှု၊ စီးပွားရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့က နိုင်ငံတကာမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဖိတ်ခေါ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ပူးတွဲကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် နီပေါနိုင်ငံ၊ ဝန်ကြီးချုပ် Mr. Khadga Prasad Oli နှင့် နီပေါ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး Dr. Yuba Raj Khatiwada တို့က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းကလည်း အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
နီပေါဝန်ကြီးချုပ်က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆွဲဆောင်ရာတွင် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကာအကွယ် ပေးရေး တို့သည် အရေးပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းက နီပေါနိုင်ငံအနေဖြင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆွဲဆောင်ခြင်း၊ ပို့ကုန်တိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်သကဲ့သို့ အနာဂတ်တွင် စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံရေးမှာ အရေးကြီးသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ကိုလည်း အားပေးမြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အကြံပြု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် အစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား အပြီးတွင် နီပေါနိုင်ငံသမ္မတ H.E. Mrs. Bidya Devi Bhandari အား နီပေါသမ္မတအိမ်တော်သို့ သွားရောက် ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါ သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် နီပေါဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. K.P. Sharma Oli နှင့် လည်းကောင်း၊ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Dr. Yuba Raj Khatiwada နှင့် လည်းကောင်း၊ စွမ်းအင်၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Mr. Barsaman Pun နှင့် လည်းကောင်း အသီးသီး တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တိုးမြှင့်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြ ပါသည်။
ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် နီပေါ ရုပ်/သံ မီဒီယာအချို့၏ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများကို လက်ခံဖြေကြား ကာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နီပေါနိုင်ငံတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အလားအလာများကို ရှင်းလင်းပြောကြား ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။